Miatrika Sazy 15 Taona An-tranomaizina Fanampiny I Nabeel Rajab Mpiaro Ny Zon’olombelona Bahrainita · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Desambra 2017 4:56 GMT
Vakio amin'ny teny English, عربي, Español, Italiano, Français, English
Nabeel Rajab (ankavanana) sy Abdulhadi Alkhawaja nandritra ny diabe manohana ny demaokrasia tao Bahrain tamin'ny taona 2011. Sary avy amin'ny Foibe Mpiaro Ny Zon'Olombelona ao Bahrain [CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons]
Nosoratan'i Khalid Ibrahim, tale mpanatanteraka ao amin'ny Foiben'ny Helodrano ho an'ny Zon'Olombelona, fikambanana tsy miankina iray tsy mitady tombontsoa izay mampiroborobo ny fahalalaham-pitenenana sy mikarakara fivoriana am-pilaminana any amin'ny faritry ny Helodrano sy ireo firenena manodidina azy ity lahatsoratra ity.
Nogadraina noho ny fiarovany ny zon'olombelona nanomboka hatramin'ny 13 jiona 2016 ilay Bahrainita mpiaro ny zon'olombelona malaza, Nabeel Rajab. Manefa sazy roa taona an-tranomaizina izy amin'izao fotoana izao noho ny resaka nataony tamin'ny fampitam-baovao momba ny zon'olombelona ao Bahrain. Miatrika sazy an-tranomaizina fanampiny ihany koa izy noho ny fanehoany hevitra tao amin'ny Twitter.
Rajab no filohan'ny Foibe misahana ny Zon'olombelona (BCHR) ao Bahrain, tale mpanorina ny Foiben'ny Zon'Olombelona ho an'ny Helodrano (GCHR), Sekretera Jeneraly lefitra ao amin'ny Federasiona Iraisam-pirenena momba ny Zon'olombelona (FIDH), sady mpikambana ao amin'ny Biraon'ny Mpanolotsaina ao amin'ny Divizionan'ny Mpanara-maso ny Zon'Olombelona any Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra (HRW) izy.
Tamin'ny volana Jolay 2002, nanangana ny BCHR niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy Abdulhadi Al-Khawaja izay nanefa sazy mandra-pahafatiny noho ny fiarovany ny zon'olombelona izy. Mbola manohy ny asany ny BCHR mandraka androany na dia eo aza ny fanapaha-kevitry ny manampahefana ny hanakatona ny foibe tamin'ny volana Novambra 2004, sy ny fanagadrana ireo mpanorina miisa roa.
Raha nanomboka ny fitroarana malaza tany Bahrain tamin'ny 14 Febroary 2011, nafana fo tamin'izany i Nabeel Rajab amin'ny maha mpitarika mpiaro ny zon'olombelona azy. Raha nisambotra ny ankamaroan'ireo mpitarika ny fitroarana ny manampahefana dia izy sisa no hany feo re tety ivelan'ny fonja, izay ren'ireo mpanjohy an'hetsiny tao amin'ny Twitter sy ny sisa manerana izao tontolo izao ary manamarina ny fanitsakitsahana henjana ataon'ny governemanta izay mampihorohoro tanteraka ny vahoaka iray manontolo noho ny fitakiana ny fahafahana, fitoviana ary ny rariny ara-tsosialy.
Mafy ny nahazo an'i Rajab noho ny fanoloran-tenany tamin'ny fitroarana Bahrainita sy ny fikatrohany ho an'ny fiarovana ny zon'olombelona​​. Nosamborina sy nogadraina imbetsaka izy ary lasibatry ny karazana fandrahonana isankarazany, fandrahonana ara-pitsarana, fanalam-baraka avy amin'ny fampitam-baovao, fampijaliana, ary fandrarana tsy hivoaka ny firenena.
Tamin'ny 10 Jolay, voaheloka am-ponja roa taona izy rehefa nomelohina tamin'ny fampielezana “vaovao sandoka”, nandritra ny antsafa tamin'ny fahitalavitra izay niresahany momba ny firongatry ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao amin'ny fanjakan'ny Helodrano. Tao anatin'ireo antsafa ireo, niresaka momba ireo mpanao gazety sy ireo ONG izay voarara hiditra an'i Bahrain i Rajab ary ny tsy fisian'ny fahaleovantenan'ny fitsarana. Ny 22 Novambra, nanamafy ny saziny roa taona an-tranomaizina ny fitsarana ambony ao Bahrain.
Raharaha iray hafa, miatrika hatramin'ny 15 taona an-tranomaizina i Rajab noho ny fanakianana ny fandraisana anjara an'i Bahrain tamin'ny ady notarihin'i Arabia Saodita tamin'ny mpikomy Houthi tany Yemen, sy noho ny firesahany ny fampijaliana tao amin'ny fonja “Jaw” malaza ratsy ao Bahrain tao amin'ny Twitter. Fantatra fa hiatrika fitsarana indray i Rajab amin'ny 31 desambra 2017 noho ity raharaha ity. Kanefa tampoka teo dia natao tamin'ny 5 Desambra ilay fitsarana, efatra herinandro talohan'ny daty voalohany voalazan'ny fitsarana. Ny 3 Desambra, nampahafantarin'ny fitsarana ny mpisolovavan'i Rajab fa hatao ny 5 Desambra ny fitsarana, araka ny filazana fa tsy afaka hanatrika ny fitsarana ny 31 desambra ilay vavolombelona fototra tamin'ity tranga ity. Natao tamin'ny 5 Desambra ihany ny fitsarana na dia nanohitra izany fanapahan-kevitra izany aza ireo mpisolovava an'i Rajab, ary nahemotra ny 7 Desambra. Tsy afaka nanatrika ny fitsarana i Rajab noho ny antony ara-pahasalamana.
- Rushing the case, raises fears of imminent sentence#Bahrainpic.twitter.com/eKVBMWSD3K
- Tsy afaka hanatrika ny fitsarana i Nabeel Rajab noho ny olana ara-pahasalamana
- Tsy nomena fotoana hiomanana ny mpisolovavany, fa filazana 2 andro mialoha monja
- Nolavin'ny Fitsarana ny fangatahana fanemorana avy amin'ny mpisolovava
- Nahatonga ahiahy momba ny sazy tsy ho ela ny fihazakazahan'ny raharaha
Ny 7 Desambra, nahemotra indray ho amin'ny 15 Janoary ny fitsarana .
Nahemotra ho amin'ny 15 Janoary androany ny fitsarana an'i @NabeelRajab faha-20 mba ahafahan'ny mpiaro azy mametraka tohan-kevitra farany.
• Voampanga noho ny fanehoan-kevitra manameloka ny daroka baomba nataon'ny Saodiana tany Yemen sy noho ny fanambarana ny fampijaliana misy ao Bahrain izy
• Miatrika 15 taona an-tranomaizina
Miatrika sazy an-tranomaizina fanampiny i Rajab noho ny fiampangana mifandraika amin'ny taratasy roa izay navoakany tao amin'ny New York Times sy ny gazety frantsay Le Monde, fony izy tany am-ponja.
Tao anatin'ny taratasy navoakany tao amin'ny NYT izay nivoaka tamin'ny volana Septambra 2016 dia nanoritsoritra ny fomba nihazonana azy i Rajab ary niantso ny fitondrana Obama mba “hampiasa ny fahefany” hamaranana ny fifandirana ao Yemen sy hiasa mba “hiaro ny famotsorana ireo olona izay mitaky fandriam-pahalemana, sy miezaka ny hanangana ny demaokrasia ao amin'ny faritra”. Noho io lahatsoratra io, voampanga ho “nanohintohina ny voninahitry ny fanjakana” i Rajab.
Tao amin'ny taratasy navoakany tao amin'ny Le Monde tamin'ny volana Desambra 2016, niantso an'i Frantsa sy Alemaina i Rajab mba hanamafy indray ny fanohanan'izy ireo ny fanjakana Helodrano Arabo. Nomelohina ho “nampiely vaovao sy fanambarana diso ary nanely tsaho manohintohina ny lazan'i Bahrain sy ireo firenena mpirahalahy aminy ao amin'ny GCC [Filan-kevitry ny Fiaraha-miasan'ny Helodrano] ary nikasana hanozongozona ny fifandraisan'izy ireo” izy taorian'ny famoahana izany lahatsoratra izany
Fikambanana maro sy vondrona mpiaro zon'olombelona no niantso matetika ny manampahefana Bahrainita mba hamotsotra an'i Nabeel Rajab. Tamin'ny volana Mey, naneho ny ahiahiny manokana momba ny fihazonana an'i Rajab any amin'ny toerana voatokana ny Komity Miady Amin'ny Fampijaliana ao amin'ny Firenena Mikambana (CAT) ary nitaky ny famotsorana azy. Maro ireo fikambanana hafa no nitaky ny famotsorana azy, anisan'izany ireo manampahefana ao amin'ny Parlemanta Eoropeana. Ny 27 Jona 2017, namoaka fanambarana izay mitaky ny famotsorana ity mpiaro ny zon'olombelona ity ny Filohan'ny Komity Lefitry ny Parlementa Eoropeana Miaro ny Zon'olombelona Pier Antonio Panzeri :
Manitsakitsaka ny zony amin'ny fahalalaham-pitenenana ny fanagadrana an'i Rajab. Miantso ny manampahefana Bahrainita aho mba hamela an'i Nabeel Rajab hahita ny mpisolovavany sy ny fianakaviany, sy hanafoana ny fiampangana azy ary hamotsotra azy avy hatrany
Mbola any am-ponja i Rajab na dia teo aza ireo fitakiana ireo. Tsy izy irery ihany no nogadraina noho ny fiarovana ny zon'olombelona na noho ny fikatrohana ara-politika na noho ny fanehoan-kevitra manokana am-pilaminana ao Bahrain. Araka ny vondrona mpiaro zon'olombelona, efa maherin'ny 4.000 ireo gadra politika ao amin'ity fanjakan'ny nosy kely iray izay tsy misy afatsy mponina miisa 1,4 tapitrisa ity.